.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - အာဘွား Album
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - အာဘွား Album
ဝိုင်းစုရဲ့ အာဘွား Album သစ်လေးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တောင်းဆိုလို့ သီချင်းဆိုဒ်တွေမှာ လိုက်ရှာပြီးတော့
ဒေါင်းလိုက်ရတယ်။ လိုင်းကမကောင်း သူတို့တင်ပေးထားတာက 128 kbps ကွာလတီနဲ့ ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို
ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ဒေါင်းယူခဲ့ရပါတယ်။ ခုတော့ လိုင်းမကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော နားထောင်လို့ ၊ ဒေါင်းယူလို့
အဆင်ပြေအောင် 64 kbps နဲ့ ဆိုဒ်ချုံ့ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။
1 အာဘွား Click Here !! Click Here !! 1.45 MB
2 နောက်ဆုံးအချစ် Click Here !! Click Here !! 1.73 MB
3 Sweet 16 Click Here !! Click Here !! 1.82 MB
4 ဟိုတုန်းကအိမ် Click Here !! Click Here !! 1.56 MB
5 အိပ်မက်လှေ Click Here !! Click Here !! 1.55 MB
6 အပြစ်မဲ့သက်သက် Click Here !! Click Here !! 2.07 MB
7 သိသလိုမသိသလိုနဲ့ Click Here !! Click Here !! 1.41 MB
8 ချစ်တာအမှား Click Here !! Click Here !! 1.95 MB
9 လူဆိုးမလေးအချစ် Click Here !! Click Here !! 1.83 MB
10 အလွမ်းတေးပန်းချီ Click Here !! Click Here !! 2.23 MB
11 ပန်းပွင့် Click Here !! Click Here !! 1.72 MB
12 မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှု Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
အသိပေးခြင်း ။ ။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - အာဘွား Album က ဒေါင်းသူ 1000 ကျော်တာကြောင့် ခုဆို Error 403 ကို
ပြသွားပါတယ်ဗျာ..။ အနော်လည်း တင်ပြီးတော့ ထပ်မနှိပ်ကြည့်မိဘူး။ အသိပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
ခုတော့ Google Drive လင့်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်။ သီချင်းနာမည်လေးတွေကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူကြလိုက်ကြပါ။
သီချင်းနာမည်တွေကိုတော့ မြန်မာလိုအသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လို ပေါက်ရရေးထားပါတယ် ဟီးးဟီးး Myanglish ပေါ့ :D
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - အာဘွား Album ဒေါင်းရန် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
အနော့်ဆိုဒ်လေးကို လာရောက် အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 11:04